Traveling Ao Eoropa amin'ny Budget A Tips | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Traveling Ao Eoropa amin'ny Budget A Tips
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 10/04/2021)
Mandeha any Eoropa eo amin'ny teti-bola dia sarotra! Na izany aza, fa azo atao raha mbola manao ny fikarohana mba handamina ny diany amim-pahendrena. Mety hahagaga anao ianao fa tena afaka mamonjy amin'ny alalan'ny fanaovana ny tsara fomba fitaterana na mifidy toerana mora kokoa. Matokia antsika; misy teti-bola-namana safidy amin'ny zavatra rehetra miaraka ny diany - from attractions ny fitaterana ny sakafo ny trano.
Tsarovy, mpandeha ao amin'ny teti-bola dia tsy "mahantra:"Ry zareo savvy! Koa alohan'ny miala tsiny mahatsiaro ho anao, mieritreritra ny vola rehetra ianao, dia hamonjy raha mbola manao mahagaga fahatsiarovana. Ny teti-bola dia voafetra sy sarobidy; noho izany, tokony hiatrehana izany amim-pitandremana. Ireto misy toro-hevitra ny ambony noho ny mandeha any Eoropa amin'ny teti-bola:
Misaina ny Route
Manaova ny faritany haleha izy alohan'ny zavatra hafa rehetra. Tsy isalasalana, ianao efa nahazo ny lisitr'ireo tsy maintsy-hitsidika eoropeanina Destinations. zava-misy, ianao tsy afaka mitsidika azy rehetra rehefa mandeha any Eoropa amin'ny teti-bola, indrindra fa raha ny fotoana dia araka izay voafetra ho toy ny teti-bola. Ka raha tokony manosika ho hitanao avokoa izy rehetra, haka ny ambony roa na telo. Ary jereo ny sari-tany mba hahitana raha ny tanàna ianao mieritreritra dia mora mifandray amin'ny, ary inona no tanàna hafa no teny izay dalana.
Ohatra, dia mety ho liana amin'ny nitsidika Paris sy Amsterdam. Jereo ny lalana, ary Ho hitanareo fa ny Bruxelles dia tanàna miorina eo amin'ny roa! By mifidy tanàna izay mampifandray, na ireo izay eo anelanelan'ny roa toeran-nofinofy, dia afaka mahazo Bang bebe kokoa noho ny Buck.
Ianao hahazo ny tsara indrindra taha rehefa hamandrika ny trano fandraisam-bahiny na hotely efitra mialoha. The aloha, ny tsara kokoa. Fidio amim-pahendrena ny trano.
Raha Suites amin'ny trano fandraisam-bahiny Kintana 5-midika tanteraka fampiononana sy lafo vidy, ry zareo tsy ny manan-tsaina safidy rehefa mifandray amin'ny teti-bola mafy. koa, mipetraka amin'ny lafo hotely efitrano dia ho lao ny vola, indrindra raha mahakasika ny faritany haleha izy Nitsidika toerana mana sy trandrahana ny tanana. Izany dia midika hoe ianao ihany no mampiasa ny efitrano mba hidona sy mandany indrindra ny andro ka tokony ho.
Raha tianao hotehirizina, mba hitoetra eo an-toerana maimaim-poana amin'ny alalan'ny fitsidihana fifanakalozana mandray vahiny. Anisan'ny trano mora hafa tranom-bahiny fa ny tolotra efitrano fatoriana iombonana fomba trano. Room Rentals amin'ny tsena an-tserasera tahaka ny Airbnb koa mety tsara ho an'ny mandeha any Eoropa amin'ny teti-bola.
Mihinana toy ny eo an-toerana, rehefa mandeha any Eoropa amin'ny teti-bola
Gastronomic mahafinaritra dia na aiza na aiza ao Eoropa. Fa raha ianao mandeha any Eoropa amin'ny teti-bola, ny zavatra hendry tokony hatao dia ny misoroka ny fisakafoanana any amin'ireo toerana fizahan-tany lafo vidy. Aza avela handrava ny trano fisakafoanana vola taratasy sakafo teti-bola.
fa tsy, mihinana toy ny ao an-toerana ary hahazo ny tena ara-kolontsaina traikefa. Sakafo tsoavaly sy ny an-dalambe sakafo rehetra ny tanàna eoropeanina, ary ry zareo ny tonga lafatra mba hividy toerana mafampana marina nahandro. Ary ny tsara indrindra dia ny hoe izy ireo ihany no lafo vitsy euro. Raha te-hamonjy ny sakafo, namely ny mpivarotra. Raha toa ianao mijanona ao amin'ny efitra iray izay manana ny ho enti-mahandro, mividy sakafo ho lovia dia afaka mora foana ho.
Matoria ary ny Train
Matory eo amin'ny fiaran-dalamby eo amin'ny toerana angamba iray amin'ireo toerana tena toro-hevitra ho an'ny olona mandeha any Eoropa amin'ny teti-bola. Fa tsy mandany ora antoandro sarobidy amin'ny fitaterana, misafidy ny handeha amin'ny iray alina fiaran-dalamby. Mety hahagaga anao fa tena mora izany noho ny famandrihana ny trano fandraisam-bahiny ho an'ny alina. Azo antoka, ianao malahelo ny toerana manodidina, fa ianao mifoha tsara nitoetra tao amin'ny tanàna vaovao!
Ready to start traveling in Europe on a budget and boky ny fiaran-dalamby? Fiaran-dalamby Book tapakila tany am-boalohany ary hahazo ny tsara indrindra efaha amin'ny seza!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#teti-bola #traveleurope budgettravel cheaptravel savemoney